Ingabe i-Head Halter ilungele Inja Yakho? - The Kerry Blue Terrier Foundation
Shiya amazwana / Ukuziqeqesha Ngokuziphatha, OLD - Ukuzala Intro, Training / By Umhleli wewebhu we-KBTF / September 15, 2016 July 30, 2019
Encwadini ebhalwe ngumqeqeshi wezinja odumile futhi obonwa kahle, ngaphansi kwesihloko esithi “Izinsiza okufanele kugwenywe, futhi ngani,” kusho ukuthi umphimbo wekhanda
Ukukhetha okungalungile kokuhamba ngezilwane zasekhaya ngoba
"Kungamampunge kabi ukudonswa ikhanda."
"I ... ivimbela inja ukuthi ibheke nxazonke, ikhethe ukuthi ibheke kuphi futhi ihlwithe futhi inikeze ezinye izinja amasiginali."
Izinja eziningi… ziyaxineka…. abanye bangacasulwa yile nto ebusweni babo… futhi bangacindezelwa. ”
USepephanie Borns-Weil, DVM, ophendula uTufts, uthi, “Uma usebenzisa isinqe sekhanda ukudonsa inja ngasekhanda, lapho ke
ukuyisebenzisa ngendlela engafanele. ”Futhi“ akulona iqiniso, ”kusho, ukuthi i-haterter ekhanda" ivimbela inja ekubhekeni nokukhonkotha, njll.
ukusebenzisa i-halter ekhanda ukuba nenja ekhanda le-nelson, ”kusho yena. “Sikhuluma ngokuhambahamba okuxakile. Inja emaphephweni ekhanda kufanele ibe
ikwazi ukubheka yonke indawo lapho ifuna khona.
“Ngifaka i-batalog ye-baseball,” kuqhubeka uDkt. Borns-Weil. "Kungaba yingozi enkulu uma kusetshenziswe ngokungalungile. Ingasetshenziswa njengesikhali. Kepha akwenzeki
kusho ukuthi akufanele isetshenziselwe ukudlala i-baseball. Le ndaba iyangikhathaza, ”kusho yena,“ ngoba ngibona abantu abaningi abaqala ukusebenzisa i-halter ekhanda,
bese kuthiwe ngumqeqeshi ongakujwayele ukusetshenziswa kwaso ukuthi kuyithuluzi elibi. Njengomphumela batshintshela kokunye okuthile ngaphambi kokunquma
ukuthi ukunqamula ikhanda kuyikhethelo elifanele. ”
Kungani ikhanda elingemuva lingaqondwa kahle
Iningi lenkinga ngama-ikhanda ama-halters ukuthi ukusebenzisa okukodwa akulungile; kuthatha isikhathi ukukuthola. Engxenyeni enkulu, lokho kungenxa
"Iningi labantu abasebenza nezinja baqeqeshelwe ukusebenzisa izilungiso, ngakho-ke bafaka i-yank eqinile lapho befuna ukuthi inja ihambisane noma bangahambelani nayo
enye inja, noma umuntu, ”kusho uDkt Borns-Weil. “Kepha uma ukwenza lokho nge-halter ekhanda, kunciphisa amandla ayo okusebenza kahle. Ukugibela kuwo
kufanele ibe mnene, hhayi ukulungiswa, noma ukujeziswa. Kufanele kube ukuxhumana. 'Ungakwazi ngicela wehlise ijubane? Ngeke ngikwazi ukuvumelana nawe. ' Noma,
? Kuzofanele ngikususe ngokushesha kwinto eyingozi, njengokuza komgwaqo. '
"Kufana nokufunda ukushayela i-England lapho, yonke into ibheke phezulu emuva," kusho udokotela. “Iningi labantu abaqeqesha njalo
amabala asicaba kanye noxhaxha kufundiswa ukubeka ijerk ebukhali kukholishi ukuze inja iphulukise. Lokho akukuhle kunoma yisiphi isimo, futhi akulungile neze
ngokunqamula ikhanda. "
Indlela elungile nendlela engalungile yokwenza inja yakho ihambise indlela oyifunayo
Kayikho inja okufanele "idonswe ezungeze" noma ngabe iyiphi insiza, uDkt BornsWeil uthi. Izinja eziningi kakhulu, lapho uzibona zidwetshwa noma zidonswa ngumunwe onamathiselwe
kuya kukholaji elisicaba, bayaphithizela. Futhi ukwenza inja idonsa umoya? unqamule umoya wakhe? "Kwandisa ukwesaba nokukhumula inja ubani
usevukile, ”kuphawula. "Izinja ezinobuso obufushane njengePugs, ukunqamula ku-airway kungakhuphula ngisho nengcindezi ye-intracranial futhi kudale nezinkinga ezinkulu,
kufana nokwenza amehlo abe makhulu ngokwemvelo. Kwesinye isikhathi uzobona inja iphenduka ibe luhlaza okwesibhakabhaka lapho ingcindezi yentamo evela ekuxinaniseni okuqinisayo kumbangela ukuba anganele
umoya-mpilo. Uklwebekile. "
Lesi ngesinye sezizathu ukuthi ikhanda elinqamula ikhanda, elizungeza ihlosi lenja, lingahle lisebenze kangcono kunekhola ezungeze intamo yenja eminingi. Izinja ze-brachycephalic, ezikabani
amakhala amafushane kakhulu ukuthi angalingana nokhanda lwenhloko, ukuqina komzimba kungathatha indawo yekhola ejikeleza intamo.
"Akukhathaleki futhi kuyingozi enkulu ukuba nengcindezi ekhaleni [noma esiqwini somzimba ngehabhu] kunokuma entanyeni," kuchaza uDkt Borns-Weil.
“Kukhona izicubu ezintekenteke nezibalulekile entanyeni. Kwi-autopsy, inamba enkulu yezinja ezazishaye imithwalo ilimaze izicubu zayo ezithambile
"(Leyo yingxenye yokuthi ama-choke noma i-prong collars kufanele avele aphume embuzweni. Enye ingxenye ukuthi kusho ukulimaza inja, futhi
yilokho nje lezo zinhlobo zamakhola zenza.)
Ingcindezi ekhanda kanye napeet kusuka ekhanda enganqeni akufanele ibe namandla, njengoba abanye abantu beyenza ibe nemichilo enamathele emqaleni. Eqinisweni, it
kufanele kube ukuthinta okukhanyayo. Lezo yizindawo ezibucayi kakhulu begazi eziphendula ekulweni okungatheni. Okuningi kungukuphikisana.
"Uma sisetshenziswe kahle, ingcindezi engemakhanda ifana nokuhamba ngomuntu enqamula egumbini elinabantu abaningi ngokubeka isandla ngemuva ehlombe labo," uDkt Borns-Weil
kusho. “Uqondisa kunokucindezela, usebenzisa ingcindezi emnene kakhulu ukuxhumana nabo ngokuthinta. Uma uyisebenzisa ngokweqile, kulapho ukhona
ukukwenza okungalungile? ukudonsa inja ngekhanda. ”
Akudingeki nje usebenzise i-halter ekhanda ngobumnene, kufanele uvuze ukubambisana kwenja ngamazwi afudumele okudumisa nawokuphaka, okungenani ekuqaleni.
"Ukugwazwa ekhanda akwenzi lutho ngokwalo," kusho uDkt Borns-Weil. "Kufanele isetshenziswe kanye nokudumisa ukuziphatha okufanele,
okubaluleke kakhulu ekuqeqesheni okufanele. Yilokho-ke okuzobopha isivumelwano sokuthi ifundiswe ukufundisa inja ukuthi ingadleli ngokushesha okukhulu, noma endleleni engafanele. ”
Yiziphi izinja ezingasizakala ngogqozi lwekhanda?
“Uma inja idonsa kanzima bese igijimisa ukuphela kokuxebuka ngaso sonke isikhathi futhi igxila kuze kube yilapho kuba nzima noma kuyingozi ukuyigibela,
ukunqunda ikhanda kungaba yindlela enhle yokumqeqesha, ”kusho uDkt Borns-Weil. “Ezinye izinja zilukhuni futhi zidonsa kanzima. Bazokhipha ingalo yakho. Okomuntu
njengami, owayelokhu emsusa ehlombe ngaphambi kokuba ngihlinzwe ihlombe, noma mhlawumbe kumuntu osekhulile, ukunqunda ikhanda kungaba ithuluzi elihle
thola inja ezokulalela, ukukuzwa lapho iphazamiseka ngenye indlela. "Akudingeki ube nomthetho wobushiqela lapho ulawula zonke izici ze
Impilo yenja, noma uyihamba. Kepha kufanele ukwazi ukuqhubeka ngendlela ephephile nenhlelekile ukuze kungalimali muntu.
“I-halter ekhanda futhi iyithuluzi elihle kwizinja ezihlukumeza ezinye izinja, okuyinto evame njalo ukuzama ukuziphepha ngoba
ngokwesaba. ”UDkt Borns-Weil usebenzisa isibonelo senja yakhe, uKoshi. “UKoshi uyi-80-pound Doberman,” kusho yena. “Uma engiqotile ngokuzumayo, ikakhulukazi
ubusika lapho konke kuyiqhwa, ngangizokwehla, noma ngiqinile ngosayizi wami. ”Futhi uKoshi, ongazange eze empilweni kaDkt Borns-Weil waze wafika
wayeneminyaka eyisikhombisa, enokukhathazeka okuthile okungamenza ahlukumeze kwezinye izinja, okwandisa amathuba okuthi uzokumba kanzima. Kepha, uDkt Borns-Weil uthi,
wakwazi ukusebenzisa i-halter ekhanda naye njengendlela yokuqeda. Uthi: “Manje njengoba sesikhulumile phansi, sengisuka ekhanda ngaya
ukuqina komzimba, ”okunganikeli ukulawula okuningi kepha nokho kuvumela ukulawulwa okuthe xaxa kakhulu kunalesi elixhunywe kwikhola elizungeze
intamo. "Ngimvimbile ukuthi angaphenduli kwezinye izinja ngokumqinisekisa uma sesisondele kuye futhi simnikeze ithuba lokuzola,
yize ekuqaleni bekungukutshela kwami ​​ukuthi 'akushiye' futhi abeke nengxabano emhlolweni. Ngaleyo ndlela, ngamfundisa ukuthi iphephile
umyalezo engithi ngizomvikela, umsize ngendlela enzima, kunokuba 'umqondise' ngokuziphatha okungafuneki.?
“Manje, lapho sidlula inja evusa uKoshi, usalokhu ethule kancane kodwa asheshe afune lokho akwenzayo. Ngimtshela ukuthi 'awushiye,' futhi uyazi
ukuthi ngokwenza lokho, uyovuzwa. ”Kodwa-ke, ngendlela emangalisa ngokwedlulele ekhanda, akuyona yonke inja? hhayi noma iyiphi inja yonke
ongase uzuze kokukodwa. “Uma inhloko yensimbi ilingana nenja yakho kahle, futhi uyisebenzisa kahle futhi isilwane sakho siyayizonda, kungenzeka
ungabi yizixhobo ezifanele zokumqeqesha, ”kusho uDkt Borns-Weil. Uyifanisa nokukhetha umdlalo ofanele. Umlingani wakhe "akakuthandi ukushushuluza,"
njengesibonelo. "Uthola ukuthi amabhuzu e-ski akakhululeki. Amabhuzu e-snowboard anethezekile. Ngakho-ke kuye, ngumdlalo ongcono. ”
Abantu kufanele bagcine lokho kungenzeka engqondweni nezinja zabo, kusho udokotela. “Uma inja ingakhohlwa ukuthi inakho futhi ayikwazi ukuzijabulisa uma wena
hamba ngezinyawo, akuyona leya nja. Uma kunjalo, ngaya nge-har-Walk harness noma i-harness ye-har-donction yokudonsa, noma enye yaleyo ilk. Kukhona okuphelele
iqembu lama-harnesses manje. Zivame ukunamathisela ngaphambili kwangaphambili. Abaxhumani nenja ngokubabazekayo njenge-halter ekhanda, kepha kwabaningi
ezimweni eziningi ukwedlula lokhu, kuzothuthukisa ukuxhumana phakathi kwakho nobabili kangcono kunokuba kudonswe eholweni elixhunywe kwikhola yentamo.
Empeleni, uDkt Borns-Weil uthi, kwezinye izinja, "ngicabanga ukuthi ukwedlula ikhanda kuphezulu? awudingi ukunakwa okunjalo okuzwayo. Kwabaningi
izinja, i-har-harness yokudonsa izokhipha iqhinga. Ngisebenzise eyodwa ukufundisa enye yezinja zami ezazidonsa. Kwehlisa ijubane kuye phansi. I-harness iyodwa isebenza kahle
izinja eziningi. ”
Ukuthola i-hang ye-halter ekhanda
Uma ufuna ukuzama ukuqeqesha inja yakho ukuze ulalele izinkomba zakho njengoba uhamba ndawonye
ngokunqamula ikhanda, qaphela ukuthi ukusebenzisa eyodwa akuveli ngokuphelele ngokwemvelo ekuqaleni, njengoba siphakamisile. Kuthatha kancane ukujwayela. Ngokwesibonelo,
kufanele futhi unqunyelwe ukuyisebenzisa ukuze ulunge ngokuzenzakalela. Ithi inja yakho izama ukukudonsa esikhundleni sokuhamba ngaphezulu noma ngaphansi eceleni kwakho.
(Akudingeki ukuthi isithende? Lokho kwenzelwa izinja zombukiso.) Mane ume. Akakwazi ukudonsa lapho wenza njengesihlahla. Ukungezwani ekhaleni
Imvunulo izokwenza ikhanda lakhe liguquke ukuze libheke kuwe, futhi kuzofanela abuyele kuwe noma alinde kuze kube yilapho usuqedile ukungezwani.
ngokunye okuxakile futhi angakwazi ukuqhubeka nenqubekela phambili. Into efanayo uma inja yakho isala ngemuva. Ukukhipha ukungezwani manje okulethwe ku-nape ye
intamo yakhe, kuzofanele ifinyelele kuwe. Awudingi ngisho nokugunda ngobumnene. (Kepha uma efika kuwe, uzofuna ukumtshela ukuthi yikuphi okuhle
uyintombazane futhi umhlinze ngokufudumele nokumthokozisa okuhle.)
Inkampani eyiGentle Leader inevidiyo enhle ekhombisa ukuthi isetshenziswa kanjani i-brand yayo ye-halter yekhanda ukuthola inja yokuyeka ukudonsa. Kepha okubaluleke, amavidiyo ayaboniswa
indlela yokusebenzisa kahle i-halter ekhanda (ikakhulukazi ukunqanda ulaka) iyashoda. Ngaleso sizathu, futhi ngoba kungathatha isikhashana ukuthola hang
ngakho, “kungasiza ukukhokhela ukuba nomqeqeshi okukhombisa ukuthi uyisebenzisa kanjani,” kusho uDkt Borns-Weil. “Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma uqeqeshiwe
ngokulungiswa okungatheni, ”okubandakanya i-yank ebukhali. Uthi: "Leyo ndlela yokusebenzisa izembe ngokwanele," kusho okuphambene nefilosofi.
Awulungisi noyedwa. Uqondisa ngokuthinta okuthambile kakhulu.?